रक्सीमा लठ्ठीएर ड्युटीमा ट्राफिक, कारबाही कसलाई ?
Tue, Jun 19, 2018 | 18:00:40 NST
17:11 PM ( 1 year ago )
सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि । बिहान १० बजे । अफिस समय भएकाले सडकमा गाडीको चाप धेरै नै थियो । भद्रकालीतर्फबाट सिंहदबारतर्फ जाँदै गरेको एउटा स्कुटरले लेन मिच्यो ।
ड्टुटीमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्णप्रसाद भट्टराईले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागे । नियम मिच्नेलाई कारबाही गर्नु सामान्य हो । कारबाही गर्नु पनि पर्छ । नियम मिच्दै गाडी चलाउनाले दुर्घटना हुने, जाम हुने भएकाले त्यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सचेतना फैलाउँदै आफ्नो ड्युटी गर्छन् । रक्सी खाएर गाडी चलाउनु हुँदैन, क्षमता भन्दा बढी भार बोक्नु हुँदैन, ट्राफिक नियम मिच्नु हुँदैन लगायतका नियम चालकलाई राम्रैसँग पढाएका हुन्छन् ट्राफिकले ।
तर अचम्मको कुरा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक आफैं रक्सी खाएर ड्युटी गर्छन् । मंगलबार सिंहदरबार अगाडि यस्तै दृश्य देखियो । भद्रकालीतर्फबाट सिंहदबारतर्फ गएको स्कुटर एक महिलाले हाँकेकी थिइन् । उनको पछाडि एक पुरुष बसेका थिए । स्कुटरले लेन मिच्यो । ड्युटीमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्णप्रसाद भट्टराई (असइ)ले लाइेसन्स मागे । लाइसेन्स माग्दै ट्राफिक असइ भट्टराईको मुखबाट निस्किएको स्वासको गन्ध उनीहरुले चाल पाए । ‘अरुलाई नियम सिकाउने तपाई आफै रक्सी खाएर ड्युटी गर्ने ? गल्ती हाम्रो होइन तपाईंको छ, हिँड्नु तपाईंलाई लान्छौं हामी प्रहरीकोमा ।’
यो सबै कुरा नियालेर म लगायत १०/१२ जना युवा हेरिरहेका थियौं । गाडीको ट्रायल परीक्षा दिन बिहानै ट्राफिक महाशाखा पुगेका हामीले यो दृश्य देखेपछि हामी पनि घटना भएको ठाउँमा गयौं । ति ट्राफिकको मुखबाट ढुङढुङ्ती रक्सी गन्हाएको थियो । दिउँसै रक्सी खाएर बर्दीको धज्जी उडाउँदै ड्युटीमा खटिएका ति प्रहरीले गल्तीको महसुस गर्नुको साटो उल्टै त्यहाँ जम्मा भएका म लगायतलाई गाली गरे । चालकलाई पाठ सिकाउनेले यसरी रक्सी खाएर ड्युटी गर्न मिल्छ भन्दै हामीले हाका¥यौं ।
झण्डै पाँच मिनेट जति त्यहाँ गलफल्दी भयो । ति ट्राफिकको नजिक पुग्ने जोकाहीले पनि सजिलै पत्ता लगाउन सक्थ्यो ‘उ रक्सीले टिल्ल छ, आँखा राता छ, बोली लरबरिएको छ, खुट्टा पनि सजिलै टेक्न सक्दैन ।’
हामीले ति ट्राफिकलाई ट्राफिक महाशाखा बुझाउन लाग्यौं । मान्छे धुरिएको देखेपछि महाशाखाकाबाट आएका तीन चार जना ट्राफिकले ट्राफिक असइ भट्टराई डो¥याउँदै त्यहाँबाट महाशाखा लगे ।
हामी १०÷१२ जना पनि पछि पछि गयौं । महाशाखा पु¥याएपछि ति चालक र स्कुटरमा सवार दुईजनालाई पनि कोठाभित्र लगियो । हामीलाई भित्र छिर्न दिइएन । /‘यो तिमीहरुको काम होइन, तिमीहरु सबै बाहिर जाने, हाम्रो समस्या हो, हामी छानविन गछौं ।’ सादा पोशाकमा रहेका एक प्रहरीले भने । हामीलाई भित्र छिर्न दिइएन । उता ट्रायल दिनुपर्ने भएकाले म लगायत अन्य साथी पनि ट्रायल दिन ठाउँतर्फ लाग्यौं ।
ट्रायल दिन लाइनमा लागिरहँदा सम्म सोचे, कता जाँदै छ हाम्रो देश ? नियमको पालना गराउनेहरुलाई नै हामीले नियम सिकाउनु पर्ने भएपछि कसरी बन्ला देश । नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर, बर्दीको दुरुपयोग गर्दै रक्सी खाएर ड्युटी गर्ने ट्राफिकलाई कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यसको जवाफ कसले दिने ? ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका डिआइजी प्रकाश अर्याल ज्युले रक्सी खाएर ड्युटीमा खटिएका यस्ता ट्राफिकलाई कारबाही गरेको सुन्न पाइयोस् । म लगायत सबै चालकको यही अनुरोध छ ।